सैनामैना कांग्रेसमा ४ वटा वडामा निर्वाचन, नगरसभापतिमा ५ जना चर्चामा-Nagarikaawaj.com
सैनामैना कांग्रेसमा ४ वटा वडामा निर्वाचन, नगरसभापतिमा ५ जना चर्चामा
शुक्रबार, माघ १५, २०७२
१५,माघ सैनामैना –
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन अन्तर्गत आजबाट नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । महाधिवेशनका लागि आज गाउ“ तथा नगरको वडा अधिवेशन देशव्यापी रुपमा एकैसाथ सुरु भएको छ । सबै गाविस,नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा एकैसाथ अधिवेशन भएको कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै रुपन्देहीमा पनि करिव १२ हजार नेपाली कांग्रेसका क्रियासिल सदस्यहरुले आफ्नो गाउ“, नगर वडा र नगर प्रतिनिधीहरुलाई मतदान गरेका छन् ।
यता सैनामैना नगरपालिका मा पनि वडा अधिबेशन सम्पन्न भएको छ । नगरपालिका का सबै १३ वटा वडा मा वडा समिती र क्षेत्रिय प्रतिनिधि चयन गरिएको हो । वडा नं. ४,८,१० र १२ मा निर्वाचन भएको छ भने अन्य सबै वडा मा सर्वसम्मत चयन गरिएको छ ।
जस अन्तर्गत वडा नं. १ मा क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधिमा श्री प्रसाद आले,वेदबम मल्ल र महिला सदस्यमा सन्तोषि खरेल चयन हुनुभएको छ भने वडा समिति अन्तर्गत वडा सभापति मा चिन्तामणि भुषाल, उपसभापति मा पुष्पराज शर्मा ( सिक्देल) , सचिब मा बिष्नु प्रसाद सरतुङ्गे र कोषाध्यक्ष मा हरी बहादुर पाण्डेय चयन हुनुभएको छ ।
वडा नं. २ मा क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधि मा गोबिन्द लम्साल,राम प्रसाद ज्ञवाली, राज बहादुर क्ष्ँेत्री, लक्ष्मि जैसी, सिता भण्डारी रहनुभएको छ । वडा समिति अन्तर्गत वडा सभापति मा तुल्सी प्रसाद घिमिरे, सचिब मा राम प्रसाद पौडेल र कोषाध्यक्ष मा नन्द प्रसाद थापा रहनुभएको छ ।
वडा नंं. ३ मा हरीहर पछाईको सभापतित्वमा वडा कार्यसमिती चयन गरिएको हो । जसको सचिवमा निरन्जन घिमीरे,कोषाध्यक्षमा पम्फा कार्की रहनुभएको छ । यस्तै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा प्रेम बहादुर बानिया,मित्र बहादुर ए.सी र महिलामा कमला पौडेल रहनुभएको छ ।
वडा नं. ४ मा धन बहादुर कार्कीको सभापतित्वमा वडा समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिएको छ । जसको सचिब मा जगन्नाथ गौतम, कोषाध्यक्ष्ँ मा लाल प्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ । भने क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधीको लागी निर्वाचन भएको छ । निर्वाचन मार्फत फडिन्द्र शर्मा ८४ मत, गोकर्ण पौडेल ८२ र रामबली चौधरी ६० मत सहित बिजयी हुनभएको छ ।अन्य प्रतिस्पर्धि लाल प्रसाद पंगेनी ले ५६, र सरस्वति पन्थि ले ४८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
महिला सदस्य २ जना का लागी भएको निर्वाचन मा अमृता न्यौपाने १०३ मत र बिष्नु देवी रेग्मी ६६ मत सहित बिजयी हुनुभएको छ । अर्कि प्रतिस्पर्धि धन कुमारी रानाले ५५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
वडा नं. ५ मा सुवाशचन्द्र पौडेल को सभापतित्वमा वडा समिति चयन गरिएको छ । जसको सचिब मा अनन्तराम चौधरी तथा कोषाध्यक्ष्ँ मा सुमित्रा देवी घिमिरे रहनुभएको छ । क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधीमा लोकनाथ अधिकारी, दुल बहादुर थारु र सारदा रौतार चयन हुनुभएको छ ।
वडा नं. ६ मा ढुंिडराज न्यौपानेको सभापतित्वमा वडा समिति चयन गरिएको छ । जसको उपसभापतिमा बिष्नु प्रसाद थारु, सचिब मा रेवन्त सिंजाली तथा कोषाध्यक्ष मा सुर्यनारायण चौधरी चयन हुनुभएको छ । क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधि तर्फ टोपलाल भट्राइ, हुसेनी थारु र महिला तर्फबाट रिमा पाण्डेय चयन हुनुभएको छ ।
वडा नं. ७ मा वडा समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिएको छ भने क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मा निर्वाचन भएको छ । सो वडा मा तुल्सीराम पोखरेल सभापतिमा ,सचिब मा सिताराम चापागाइ र कोषाध्यक्ष मा लक्ष्मि पोखरेल रहनुभएको वडा समिति चयन गरिएको छ । त्यस्तै क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधीका लागी तारा बेल्वासे ले १२ मत तथा शंकर ज्ञवाली ले १९ मत लिएर बिजयी हुदै चयन हुनुभएको छ । ३ जना उम्मेदवार सहभागि सो निर्वाचन मा अर्का उम्मेदवार राम प्रसाद पोखरेल ले ८ मत मात्र प्राप्त गर्नूभएको थियो । सो निर्वाचन मा जम्मा २० मत खसेको थियो ।
त्यस्तै वडा नं. ८ मा पनि वडा समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिएको छ भने क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मा निर्वाचन भएको छ । ८ मा सभापति मा हरी घिमिरे, सचिब मा सुरेश ज्ञवाली र कोषाध्यक्ष मा पुष्पा गिरी चयन हुनुभएको छ ।
सो वडा मा क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधिका लागी ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये डिल्लिराज ज्ञवाली ६६ सो वडा मा क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधिका लागी ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये डिल्लिराज ज्ञवाली ६६ मत, अच्छुत पौडेल ५२ र नारायण ढकाल ५५ मत लिइ क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मा चयन हुनुभएको छ । सो निर्वाचन मा कुल १ शय १८ मत खसेको थियो । सो वडा बाट यसअघि नै क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मा महिला तर्फ देवी भुषाल र भुमकला न्यौपाने सर्वसम्मत रुपमा चयन हुनुभएको थियो ।
वडा नं. ९ मा सर्वसम्मत समिति चयन भएको छ । वडा समिति अन्तर्गत सभापति नारायण खनाल, उपसभापति मा टेक प्रसाद बस्याल , सचिब मा कृष्ण प्रसाद भट्राइ , सह सचिब मा कृष्ण ज्ञवाली र कोषाध्यक्ष मा भगवति ज्ञवाली चयन हुनुभएको छ । त्यस्तै क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी तर्फ दामोदर ढकाल, देवी कार्की, दिपक थापा रहनुभएको छ ।
वडा नं. १० मा वडा समिति र क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मै चुनाव भएको छ । वडा समिति मा भएको चुनाव मा सभापति मा महोदत्त ढकाल बिजयी हुनुभएको छ । उहाले ५२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अर्का उम्मेदवार कृष्ण प्रसाद शर्माले २७ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । सो निर्वाचन मा जम्मा ७९ मत खसेको थियो ।वडा समिति को सचिब मा चन्द्रमणि भण्डारी र कोषाध्क्ष मा जिबन ज्ञवाली चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी तर्फ रघुनाथ घिमिरे र कृष्ण प्रसाद पाण्डेय बिजयी हुनुभएको छ । रघुनाथ घिमिरे ले ५१ मत प्राप्त गर्नुभयो भने कृष्ण प्रसाद पाण्डेय ले ३७ मत प्राप्त गर्नुभयो । पराजित खडानन्द खनाल ले ३२ र दुर्गा खनाल ले २७ मत प्रँप्त गर्नुभएको थियो । यस्तै महिला तर्फ सिता पाण्डेय ४५ मत सहित बिजयी हुनुभएको छ ।अन्य प्रतिस्पर्धि अस्मिता सुनार ले १७ तथा कमला भण्डारी ले १२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
वडा नंं. ११ मा पनि सर्वसम्मत समिति चयन भएको छ । जस अन्तर्गत वडा सभापति मा गोपाल पोखरेल, सचिब मा एम प्रसाद तिवारी र कोषाध्यक्ष मा सरस्वति काफ्ले रहनुभएको छ । त्यस्तै क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मा पारस पाण्डेय, कृष्ण बहादुर चुनारा र महिला तर्फ इन्दिरा गौतम रहनुभएको छ ।
वडा नं. १२ मा वडा समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिएको छ भने क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधी मा निर्वाचन भएको छ । जस अन्तर्गत वडा सभापति मा लिलाधर भण्डारी, सचिव मा सुशिला पोखरेल तथा कोषाध्यक्ष मा लिलाधर अधिकारी चयन हुनुभएको छ । क्ष्ँेत्रिय प्रतिनिधि तर्फ भएको निर्वाचन मा ओम प्रकाश पौडेल र झविलाल भट्राइ निर्वाचित हुनुभएको छ ।
र वडा नं. १३ मा सर्वसम्मत समिति चयन भएको छ । जस अन्तर्गत वडा सभापति मा भगवति थारु, सचिब मा एकनारायण थारु र कोषाध्यक्ष मा फगनी थारु चयन हुनुभएको छ । त्यस्तै क्षेत्रिय प्रतिनिधि तर्फ मुकुन्द्र चिदी मगर , चन्द्रमणि भट्राइ र महिला तर्फ पुर्णकला राना मगर चयन हुनुभएको छ ।
कांग्रेसको निर्वाचन तालिका अनुसार माघ २२ मा Ôेत्रको र माघ २५ मा जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन हुनेछ । १३ औं महाधिवेशन भने आगामी फागुन २० देखि २३ सम्म काठमाडौंमा हुनेछ ।
नगरसभापति मा ५ जना को नाम चर्चामा
यसैबिच भोली हुने नगरसभापति का का लागी ५ जना आंकाशी देखिएका छन् । सोही अनुसार उनिहले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन का लागी दौडधुप मा देखिएका छन् । सभापति मा राम प्रसाद अधिकारी, कृष्ण पोखरेल, रघुनाथ घिमिरे, नारायण खनाल र लोकनाथ अधिकारी को नाम चर्चा मा छ ।